Qodobkeena Dugsiga Hoose ee George Dixon waa mid ka mid ah heer sare iyo raaxaysi iyo aragtidayaduna tahay in aan noqdo dugsi doorasho bulshadeena. Si arrintan loo sameeyo, waxaan higsaneynaa:
Hagaajinta manhajka si loo kobciyo nolosha ardaydeena, waxay taageertaa qiyamka iskuulkeena iyo abuuritaanka horumarin wax ku ool ah. Tani waxa ay ku saleysantahay habdhaqan bulsho iyo shucuur leh oo ku salaysan xaruntiisana waa tiknoolijiyad ahaan, iyadoo la adeegsanayo tiknoolaji si loo hagaajiyo khibradaha waxbarasho.
Abuuri hannaan Sannad-Bille ah oo Habboon, oo carruurteena u soo bandhigi doona guusha mustaqbalka laga bilaabo dhibcooyinka bilaabista. Waxaan u adeegsan doonaa habka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Early Years' si loo kobciyo manhajkeena ballaaran. Tani waxay ku jiri doontaa qodobbada bixinta joogtada ah ee bixiya fursadaha joogtada ah ee carruurta ay wax ku bartaan - si ay qaybo kala duwan oo manhaj ah loo barto waqti isku mid ah waxaana loogu talagalay inay carruurta u oggolaadaan 'inay qaataan waqtigooda' si ay u bartaan waxyaabaha muhiimka ah.
Horumarinta ka qaybgalka waalidka, dhisida kaqaybgalka waalidka ee aan hadda ku leenahay, taasoo horseedda natiijooyinka horumarinta carruurta, qoysaska iyo bulshada. Waxaan aamminsanahay in xiriiradu ay muhiim yihiin isla markaana ay hadda ku lug leeyihiin mashruuc dugsi oo dhan si ay u noqdaan dugsiyo nabadgelyo leh. Waqtiyada wareegga, PSHE / SMSC iyo waqtiga qaadashada wada sheekeysiga dib u soo celinta, waxaan ognahay in caruurtu awood u yeelan doonaan inay sameeyaan intii ugu fiicnayd waxbarashadooda hadda iyo mustaqbalkaba.
Carruurta iyo shaqaalaha ayaa si adag u shaqeynayey si ay u horumariyaan qiimaha dugsigeena, oo aan ugu yeerno 7C: xanaaneynta, ballanqaadka, ixtiraamka, geesinimada, tixgelinta, iskaashiga iyo isgaadhsiinta. 7C-daas ayaa hoosta ka xariiqay wax walba oo aan ka sameyno George Dixon Primary; waxay go'aamiyaan sida aan ula socono waxbarashadayada oo aan ula macaamilno kuwa kale. Waxaan aaminsanahay inay dugsigeena ka dhigaan meel wanaagsan oo ay la wadaagaan Qiimaha Ingiriiska ee Dimuqraadiyadda, xorriyaadka shakhsi ahaaneed, dulqaadka, ixtiraamka iyo xeerka sharciga.